Notsindromina formol i Marc Tatandraza araka an'ity video ity • Madagossip
il y a 1 année 2.8 K
Miteraka resa-be ny fahafatesan’ity mpaminany, apostoly, ambasadaoron’ny lanitra ity.
Marihina mantsy fa mialoha izao dia nandefa sary maro voangaly tamin’ny Photoshop i Marc Tatandraza, mampiseho azy nitety firenena maro, ka nitaingina ny Air Force One an’i Bekintana mihitsy izy tamin’izany.
Nivoaka omaly ny video mampiseho ny fahafatesany sy ny fanindromana formol azy.
Maro ireo maneho hevitra fa kisarisary fotsiny ity zavatra nitranga ity.
Teto kosa efa ela no nambara fa fandrebirebena olona mba tsy hieritreritra ny olana atrehiny amin’ny fiainany andavanandro ny zavatra toy itony, indrindra ireo sarambambe marivo salosana.
Vakio koa : Mbola tsy lasa indray i Marc Tatandraza. Ity ny video hafa nataony
Tsy vitsy ny olona mitaraina amin’ny olan’ny fiaraha-monina ao amin’ny tambanjotran-tserasera: vidim-piiainana, tsy fandriam-pahalemana, karama tapaka amin’ny tsy ara-drariny, fifamoivoizana sy ny mpanao abus amin’ny cocarde, sns. Mety hivadika fitakiana izy ireny raha misy firaisan-kina eo amin’ny mpisehatra, saingy hatreto toa verivery amin’ny fampielezana sary fatin’olona, fanaovana AMEN sy RIP ary Marc Tatandraza.
Rehefa lefilefy angamba ity farany dia tsy maintsy hiverina indray ry Bibiolona sy Club satanika na koa ry mpanontany raha mifoka sigara.
Tagsmarc tatandraza rumeurs